COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆပ်ကော်မတီ၏ အသိပေးကြေညာချက် | Ministry of Planning and Finance
Posted By : editor, Date : 31.05.2021 comment
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်း OA 013733 သို့ ၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ ပြည်တွင်း / ပြည်ပ အလှူရှင်များမှ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၀ . ၁၀၀ သန်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ ရန်ပုံငွေစာရင်း၏ အခြေ အနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ရှိ စာရင်းဖွင့်လက်ကျန် ၃၀,၈၀၇,၀၉၃,၆၁၅.၃၉
(+)၂၄-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ရရှိငွေ ၁၀၀,၀၀၀. ၀၀
၁၄-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ရှိ စာရင်းပိတ်လက်ကျန် ၃၀,၈၀၇,၁၉၃,၆၁၅.၃၉
၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ရှိ စာရင်းဖွင့်လက်ကျန် ၁၇၈,၁၄၀,၁၄၉.၅၃
(+)၂၄-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ ရရှိငွေ −
၂၈-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ရှိ စာရင်းပိတ်လက်ကျန် ၁၇၈,၁၄၀,၁၄၉.၅၃
24-5-2021 to 28-5-2021.pdf 63.05 KB
ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ( ၃ / ၂၀၂၂ ) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
အကောက်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန် အခွန်ပမာဏ စုစုပေါင်း ကျပ် (၅၆.၄၂၄) ဘီလီယံ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုပေးခဲ့
အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း (ASEAN Economic Community – AEC) ၂၀၂၅ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီအောက်ရှိ ကောင်းမွန်သောစီမံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်သုံးရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term – Training on use of Moving Graphics/ 3D for Promoting Statistical Literacy
The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term – Training on Data Base System Construction No. 2
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် (၂၅) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ် (25th St. Petersburg International Economic Forum- SPIEF’ 22) သို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်
VACANCY ANNOUNCEMENT for Training on use of Microsoft Power BI
VACANCY ANNOUNCEMENT for Training on Data Base System Construction No. 1
VACANCY ANNOUNCEMENT for Training on Price Data Collecting and Reporting for Consumer Price Index